Raha tsy misy mantsy ny sampona dia amin’io herinandro io avokoa no hanatanteraka izany izy ireo, izay miankina amin’ny fandaminan’ny tsirairay avy, indrindra fa ireo sekoly tsy miankina raha amin’ny alatsinainy 15 jolay ho avy izao kosa no hozaraina ny laza adina. In-droa na in-telo eo ho eo no hanatanterahan’ireo ankizy ao amin’ny taona fahafito izany vao hiatrika ny fanadinana CEPE tena izy izy ireo izay hotontosaina ny 27 aogositra ho avy izao. Efa miditra tanteraka ao anatin’ny famerenana, araka izany, ny rehetra ka ireo taranja hita fa tena manahirana ny ankizy no hilofosana. Ho an’ireo kilasy tsy hiatrika ny fanadinam-panjakana kosa dia fantatra fa amin’ny faran’ny volana aogositra izy ireny no hiditra ao anatin’ny fotoam-pialan-tsasatra. Mikasika ny fanadinana BEPC kosa indray dia ny 9 ka hatramin’ny 12 septambra ho avy izao izy ireo no hiatrika ny fanadinana tena izy raha tsy mbola voatondro kosa ny fotoana hanaovana ny fanadinana andrana.